XOG: Ra’isul Wasaare Rooble oo booqasho ku tagaya dalal kale oo… - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon XOG: Ra’isul Wasaare Rooble oo booqasho ku tagaya dalal kale oo…
XOG: Ra’isul Wasaare Rooble oo booqasho ku tagaya dalal kale oo…
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ku wajahan dalka Isu-tagga Imaaraaatka Carabta, oo Farmaajo uu afartii sano ee la soo dhaafay meeshii ugu xumeyd taariikhda gaarsiiyay xiriirka diblumaasiyadeed ee labada dal.
Sida ay caddeynayaan xogo ay heshay Badweytims RW ayaa casuumaad rasmi ah ka helay Amiirka Imaaraatka Sheekh Khaliifa bin Zayed Al Nahyaan, waxaana la rumeysan yahay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu Abu Dhabi, u socdaali doona, ka hor inta aysan dhamaan bishan Agoosto ama ugu danbeyn billowga bisha September.
Farmaajo iyo Xukuumadiisii koobaad ee RW Kheyre hoggaaminayay, ayaa geeska galiyay Dowladda Imaaraadka, waxaana la kala diray boqollaal askari oo ay tababareen Imaaraadka, isla-markaana ay bixin jireen mushaarkooda, iyagoo fulinyay heshiis is -afgarad ah oo kor loogu qaaday iskaashiga milateri oo labada dal dhex maray 2014-kii.
Imaaraatka ayaa faraha ka laalaabtay arrimaaha Soomaaliya, kadib markii booliiska Soomaaliya ay qabteen lacag ku jirtay saddex boorso oo aan calaamad lahayn oo saarnayd diyaarad Royal Jet ah, taas oo Dowladda federaalka ay sheegtay in ay u socotay xubno ka tirsan mucaaradka bishii April 2018-kii.
2019, Dowladda Imaaraadka Carabta, waxaaa lagu eedeeyay in ay ka dambeyso hurinta xasradaha siyaasadeed ee Soomaaliya, kadib markii qaar ka mid ah Dowlad goboleedyada sida Jubaland, Puntland, ay si weyn kaga soo hor jeesteen Dowladda dhexe.
Dekedaha Boosaaso iyo Berbera ayay ku sameeyeen hormarin, isla-markaana Imaaraadka Carabta ayaa qarsan waayay damacooda ku aaddan inay doonayaan saldhig milatari oo ay ka furtaan Somaliland.
Imaartaadka, ayaa doonaya in Ra’iisul Wasaare Rooble uu gogol-xaar u noqdo, dib u soo celinta is-afgardkii ay sanadkii 2013, kala saxiixdeen Wasiirkii Arrimaha Dibadda Soomaaliya Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan iyo dhiggeedii xilligaas Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, kaas oo ujeedkiisu ahaa iskaashi iyo wada shaqeyn hormarineed.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in RW Rooble, uu sidoo kale casuumaad ka helay Amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, kaas oo siyaasadda Soomaaliya si weyn ugu lug lahaa afartii sano ee la soo dhaafay.
Safarrada dibadda ee Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaaarsiinta, ayaa ku soo aadaya, dalka oo ku jira malxalad doorasho, waxaana xubno ka tirsan xaaafiiska Rooble, ay Keydmedia online u xaqiijiyeen in Maxamed Xuseen Rooble, uu ku soo aaday xilli ay jirto lacag la’aan baahsan tiiyoo ay jirto in loo baahan yahay malaayin doolar oo lagu qabto doorashooyinka dalka.
Waddamo uu ka mid yahya Sucuudiga, ayaa laga waayay gunnooyin laga filanayay, Rooble, ayaana fursad u arka casuumaadda Guddoomiyaha Hay’adda Maal-gashiga Abu Dhabi, oo maamula hanti dhan 875 bilyan oo doolar, taasoo ah lacagta ugu badan ee uu maamulo hoggaamye qaran dunida oo dhan.
Rooble, ayaa hore ugu socdaalay dalalka Sucuudiga, Jabuuti, Ingiriiska, Kenya iyo dalka Masar oo uu hadda ku sugan yahay, waxaana la filayaa inuu dhawaan ka dego Abu Dhabi,